Banyere anyị - LangO Mold Co., Ltd.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Kunshan JS Mold Co., Ltd
Kunshan JS Mold Co., Ltd dị na Yangtze River Delta nke China ma guzobe ya na February 2004. Ụlọ ọrụ ahụ bụ ụlọ ọrụ nwere onwe. Ego ndebanye aha nde isii. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ngụkọta nke 3000 square mita. Ọnụ ahịa mmepụta kwa afọ bụ ihe dị ka nde yuan 86.
Ụlọ ọrụ ahụ na-elekwasị anya n'ichepụta na nhazi nke ụdị plastik dị iche iche dị iche iche, jigs na ngwá ọrụ nyocha, imewe na mmepụta nke igwe na akụrụngwa akpaaka, na nhazi akụkụ atọ.
Ụlọ ọrụ ahụ na-elekwasị anya n'ọhịa nke ụgbọ ala na ngwa ụlọ, karịsịa na-arụ ọrụ: ime ụlọ na mpụta ihe ịchọ mma, oriọna ụgbọ ala, edging ụgbọ ala, ihe oriri ụgbọ ala, ngwaahịa dijitalụ 3C, ngwa ụlọ na ihe ndị ọzọ na-emepụta plastik na-emepụta na ịkpụzi injection. Ugbu a, o nwere ndị ọkachamara ịkpụzi otu ihe dị ka mmadụ 110. Ụlọ ọrụ ahụ agafeela IOS9001 na asambodo usoro ndị ọzọ ma nwee ntozu ntule gburugburu ebe obibi. Ụlọ ọrụ ahụ agafeela asambodo ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu ma nwee ọtụtụ patent. Ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ inye ndị ahịa ọrụ nkwụsịtụ site na mmepụta ngwaahịa na imewe, mmepụta ihe, ịkpụzi mmepụta na mgbakọ. Ndị ahịa na-enye ihe ngwọta maka imepụta ngwaahịa na mmepụta oke. Dị ka mkpa nke ndị ahịa dị iche iche si dị, ọ nwere ike ịmepụta ihe ndị na-eme ka ụkpụrụ dị iche iche dị ka HASCO na DME n'otu oge. A na-ebupụ ihe ndị ahụ na Europe, America, Japan na mba ndị ọzọ.
▶ Iji chepụta & wuo ngwa ọrụ dị elu maka ndị ahịa
▶ Iji nye ndị ahịa ọrụ kacha mma
▶Inye Platform maka uto onye ọrụ
▶ Ịkwado ọrụ mmekọrịta ọha na eze
2006 malitere metal maching
2009 toolhop guzobe
2013 ọhụrụ ebe & akụrụngwa
2009 nọmba anyị
Ọnụ ego: 5,000,000
Ego mbata USD: 10 000 000
Ikike USD kwa afọ: 200 SETS
Ego ego kwa afọ
Debe ntọala ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe
Mee ka ikike dị elu
Mepee ahịa ọhụrụ
Usoro anyị nke imepụta ngwá ọrụ
Ngwa njikwa oru ngo